Fanomanana ny Frankofonia : manam-pahaizana kanadianina mandrafitra ny fiarovana | NewsMada
Nanapa-kevitra ny fanjakana kanadianina, nandefa manam-pahaizana manokana avy any aminy hanampy amin’ny fikarakarana ny fanomanana ny fivoriamben’ny frankofonia faha-16 hatao eto Madagasikara. « Tonga izy ireo hizara ny taikefany amin’ny komisiona eto an-toerana momba ny paikady rehetra tokony hapetraka hanamafisana izay efa natomboka mba hahatontosa soa aman-tsara ny fivoriambe. Fitsidihana faharoa izao taorian’ny volana janoary, izay nahitana ireo ezaka efa natomboka mahavelombolo », hoy ny mpandrindra ny fiaraha-miasa eo amin’i Kanada sy Madagasikara, Michèle Landry.
Efa mandeha ny fiaraha-miasa amin’ireo kanadianina ireo sy ny komisiona misahana ny fiarovana eto an-toerana, ahitana ny avy amin’ny foloalindahy, polisim-pirenena, mpamonjy voina sy avy amin’ny Adema. Mikasika indrindra ny laminasa fiarovana ny fivoriana sy ny seranam-piaramanidina ny dinikasa ifanakalozan’ireo. Nitarika, izany fotoana izany, Michel Saurette, talen’ny polisin’ny fiarovana sy ny zandary any Kanada.
15 andro ny faharetan’ny dian’ireo vahiny ireo, izay efa tonga tamin’ny 16 febroary. Nanome toky ny komisiona eto an-toerana fa hanamafisana ny fepetra efa noraisina ny fehin-kevitra ho raisin’izy ireo miaraka.